Daawo: Madaxwayne Farmaajo oo Waraaqaha Aqoonsiga ka Gudoomay Safiirka Cusub ee Itoobiya | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Monday, May 3rd, 2021 | Posted by kalshaale
Daawo: Madaxwayne Farmaajo oo Waraaqaha Aqoonsiga ka Gudoomay Safiirka Cusub ee Itoobiya
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Itoobiya u qaabbilsan Soomaaliya Mudane Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=43264
Posted by kalshaale on May 3 2021. Filed under FLASH, MAQAL IYO MUUQAAL, WARARKA, XULKA KALSHAALE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
15 Comments for “Daawo: Madaxwayne Farmaajo oo Waraaqaha Aqoonsiga ka Gudoomay Safiirka Cusub ee Itoobiya”
May 3, 2021 - 4:04 pm
Abiy ayaa bakhti afuufaya miyaa
Si nin masuuliyad haha ugu ekeeysiyo.
Su,aal kale iga hoo:
Xagee ka dhaceen
Khaatumo, awdal state iyo
Ciyaarihii shariif iyo Xasan qoslaaye
Nafta loogu keenay ee markasta
Iyo meel last lagu weydiin jirey
Ee ilaa USA lagaga mudaharaaday.
May 3, 2021 - 6:02 pm
Farmaajo waa daanyeer ciyaala suuq ah. Hawiayhaas eey daaliyeen, eey tacbaanka ka dhigeen nacaladii qabqablayaashii dagaalka oo uu ugu horreeya daanyeee Caydiid iyo Caato, eeygu eeyga dhalay ee argagaxissada ah ee Xassan Daahir Aweeys ayaa Hawiye qaarmadoobe jilciyay, oo u diyaariyaya daanyeer Farmaajo in uu maantay ku days in uu dulleeyo. Sidaas owgees, sow lama dhihi karro Caydiid iyo Xassan Daahir Aweeysba eaa garacyo, qabiilo kale ah oo u shaqeeynayay qabiilo kale?
Waxaa sidoo kale cadoega Hawiye ah daanyeerta Isaaq ee ku dhaqeeystay, taageerayayna labadaan daanyeer si eey ugu shaqeeystaan, iyaga oo iska shigaya in eey jecelyahiin.
Hawiye qaar madoobe nimankaas aan sheegay, ayaa u diyaariyay in uu maantay Farmaajo ku days wax walbi, oo iyagana eey sidii dulli is dhiibay oo kale badankood eeysan 24 saac gudahees uga soo shex qaban Xamar.
Oh, sheekadaan igu sawirta waxeey kamid tahay waxyaabaha uu ku harowsaddo cawaanta Hawiyaha. Aawayse, sheekadii Ethopia waa cado, ee uu daanyeer Farmaajo ugu sheekeeyn jirray caeaanta caqliga xun ee Hawiyaha? Waa kaas dabadda ka leefaya Farmaajo Ethopian ka!
God bless Somalia 🇸🇴
May 3, 2021 - 6:13 pm
Waxaas waxay ahaayeen MASHRUUC
lagu shaxaadijirey HAWIYE
Markuu Farmaajo yimid ayey moodeen inuu noqon
sidii Max’ed Siyaad oo GUNO IYO Garaado bilaash ah
Hotels la seexdo waxaa ugu sicir sareeyo
Kuwa u dhow AIRPORT BANAADIR STATE
Yacni yaaney diyaaradda kaa tagin
Nin FIQI SHINI AH oo Hargeysa maamulo
MIYAAN ANIGOO DABSHID AH u
COLAADIN KARAA ISAAQ ( Because of F.SH WAA HAWIYE)
Waliba anigoon ka maarmin ISAAQ IYO HARGEYSA.
* Shaqada Farmaajo waxay aheyd shaqada uu hayo
BAASHE BURIS ( order order Mujaahid)
May 3, 2021 - 6:18 pm
Salaan sare Ugaas
Farmaajo meel uma socdo ilaa loo tolo
Dacas No. 2 ah.
Hal Luuqad ayuu fahmikaraa
Middii geysay inuu ku kor calaacalo Parliament
Middii adeerkiis geysay Xeryahii Tanzania
May 3, 2021 - 6:31 pm
Maalmaha soo socda waxaa ay shaqo adag u taal Raysal Wasaare Rooble. Waxaa Looga fadhiyaa Jaale Rooble in uu Farmaajo kala wareego dhamaan Awoodaha Ciidamada Qalabka sida iyo guud ahaan amniga Wadanka.
Hadii uu Rooble ku guul daraysto in uu qanciyo Mucaaradka waxaa markaa lagama Maar maan noqon doonto in xoog lagu muquuniyo Farmaajo si qasab ahna Xamar looga saaro kadibna markaa la aado Doorasho.
May 3, 2021 - 7:11 pm
Waan kusalaamay Iimaam Dabshid,
Waxaa la rabbaa in la ogaada yaa siddaan u jilciyay, ugu diyaariyay daanyeerta Hawiyaha sheegta in uu Farmaajo ku dayyo wax walba, in uu ku dayo dullinimo? Waxeey ila tahay in eey yahiin dadkii 30 sanno lug gooynayay Hawiyaha.
Waxeey ila tahay in uu daanyeerkaan Rooble ee ra’iisalwasaaraha lagu sheegayo uusan gaareeynin, laheeyna xaniinyahii Allah ha u naxariistee ra’iisalwasaare Nuur Cadde. Waxaan ka baqi, oo aan u maleeyn in uu Rooble yahay wacal kale oo sheegato ah oo la rabba in dadka uu ku dhex jirro, oo uu sheegto lug gooyadooda ka shaqeeyo.
Yes, waa in daanyeer Farmaajo loo galiyaa kabo la’eg oo number 2 ah.
Fiiro, ilkayartu waa cawaan, maahan sidda Majeerteenka oo yaqaan xeelad, sir, xeer, iyo xataa is dillid. Ilkayarta waa sidda waraabaha oo waa wax baqti ah oo baqigana cunna. Isma qabtaan. Sidda Hawiyaha fan kama dhaxeeyso. Koofa baqtiya kuea kale waa ka carrarayaan. Cabsi maahannee xishood ma yaqaanan. Iyaga oo marti kuu ah, iyaga xididkuu ah ayeey dhabarka middi kaa galinayaan. Midgaha iyo yaxarta oo dhan ayeey xulufo isla yahiin ileeyn waa isku fir iyo DNA.. Ilkayarta waa ka qabyaalad iyo qurun badan yahiin Daaroodka kale sabbatoo ah waa sheegato rabta in la ogolaado in eey kamidyahiin Daarood. Yet again, caqli daanyeernimo darteed, Hawiye qaarmadoobe waqti ayeey ku qaadan wax in eey fahmaan.
Walaahi baan ku dhaartee in daanyeer Farmaajo iyo Ilkayartiisa eeysan si dhib yarri ah uga baxeeynin madaxtooyadii lagu keenay ‘arreey Farmaajo ii geeya, aryaa Farmaajo ii geeya’.
Hawiye qaarmadoobe, u diyaar garoobe dagaal kale iyo kuwa kaloo badan. Hadii kale sidda eey in aad dulli noqataan Caydiid iyo Xassan Daahir Aweeys, sidda eey idiinkugu jilciyeen qabqable Caydiid iyo argagaxiye Xassan Daahir Aweeys cadowgiina, iyo sidda eey idinku daaliyeen 30 sanno, is dhiiba, oo dullinimo qaata. Amaba dagaalama.
May 3, 2021 - 9:21 pm
Madaxtooyadan Somaliya,waxaaa xaadhxaadhay Cabdullaahi Yusuf,Formaajo Adeerkii.
Aiportkii furay Dikadii furay oo Eddo Batuulo u xaadhxaadhay suuqiii ay yaaleen Isbaarooyinka iyo lafaha dadkii dhintay.
Dee,Hawiye ha la dhaafo buuqa iyo qaylada meesha.
Hawiye wixiisu,waa ku qabso,ku qadi mayside kk
Siyaad ayay ku qabssdeen kkk
Cabdullaahi oo meeshan xaadhxaadhay ayay ku qabsadeen,Formaajo oo isku duba riday wax walba ayay ku dheganyihiin.
Adeer shaqo yeesha..
May 3, 2021 - 9:30 pm
Ninkani Waa Daarood, Tolow maxaa lo Oran isagana, belo ku degtey meel kasta nin Daarood ah baa nooga horeeya.
May 3, 2021 - 9:38 pm
Salaan ugaas; waxaan arkayey Dabshid oo leh yaa IRIR aheey kkkkkk ugaas miyaadan nin irira ahayn ninka maad u yara debcisid kkkkkkkkk
May 3, 2021 - 10:43 pm
Absame iyo adeerkood Bartire sidee yeelnaa, meelwalba ayagaa noo jooga..Ethiopia, Killilka Shanaad iyo Kenya NFD iyo Jubbaland..kkkk
Walle been ayey noqotay Majeerteen iyo inta Madaxmadow ayaa isle’eg…kkkkkkk
Kablalax iyo China ayaa isle’eg…kkkkkkkk😜 Kaftan.com
Allow Maryooley midee, adaa qafuuru raxiim ahe oo dhibka ka saar? Amiin.
Bisha barakaysan ee ramadaan Somali u duceeya oo dal weyn ilaahay siiyey oo barwaaqo ah in colaada iyo qabyaalada iska daayaan..
Aniga federalist ah, si Somalia dictator ugu soo noqon oo gobolada xor yihiin.
Marka rabaan diidi karaan Daanyeerka federalka Somalia xukuma…run
Vivo Somalia and Somali people🇸🇴🖐🇸🇴
May 3, 2021 - 11:05 pm
Sxb waxaan arkay page hoose in iigu qortay in Dabshid markii Rooble talada doorasha loo dhiibay in wixii Farmaajo ku diidanaa uu u ololaynayo.
Dabshid 10 sano ayaa golahaan ku lagdamaynay oo dhiiqo walba isla galnay.
Xitaa nacsiiyey in magaca Daarood soo qoro, oo reer Qurac ugu yeeraa, waayo marka Daarood caayo anigana meesha ugu soo qori jiray sida Hawiye cawaanimo u sameeyeen oo meeshii in dalka hogaamiyaan laga sugayey markii Kacaankii daanyeerka ahaa laga cayriyey dalka ay ayeeyo kufsi iyo deris bililiqaysi shaqo ka dhigteen…. Ayagoo ilaa Xaraadheere kasoo lugeeyeen..Maha waa dhul..kkkkkkkk🤔
Dabshid waa reer Hobyood, Hiraab ku rafta….he is welcome to Magadishu.
Dabshid waa ogyahay marka dood Darood iyo Hawiye i geliyo in golaha lagu yaacin…marka reer Qurac ha caayo..kkkk
Who the fuck is; reer Qurac??????
Car Dabshid Daarood hasoo qoro iyo cay.
Dabshid iyo anigu hore ayaan iskugu baaba’nay…kkk😆
He is my brother in arms with opposing fightings fronts…not real fight=fadhi kudirir😂
May 3, 2021 - 11:15 pm
Aniga haddii Ciise of Djibouti, Samaroon, Isaaq iyo Hawiye oo hadda gadaal isaga daraya noqdaan IRIR…kkkkkkk
I will really Love it. Kkkkkk
Waxaan Somali ahaan lahayn IRIR iyo DAAROOD iyo inyar oo lagu quriyey sida Raxanweyn, Gabooye, Cadcad iyo Jareer..
Allow Ina Ibrahin Cigaal u naxariiso, maalintii IRIR noo keenay waxaa naga yaraaday qabiiladii tirada badnaa….
IRIR waxaa keenay cabsi Darood laga qabo oo lagu midaynayey Isaaq iyo Hawiye.
Allow IRIRISM noo daa🖐🇸🇴 Kkkkkkk
May 4, 2021 - 12:02 am
Adigii miyaa isu jawaabi
May 4, 2021 - 12:53 am
Ma aniga ayaa iga wadaa qofka isku jawaabaya.
Boqotooyada Somalia iyo LOP waa isku nin…..kkkk
Mise qof kale sysa la hadlaysaa?
LOP hadduu Dabshid magac kale usoo qaato xiniinyaha aniga ayaa iska siibi lahaa…run
Boqortooyada Somalia waa Dhuloos sida qiyaaso..asaga ayaa noosheegin…!
LOP ayaan waqti u hayn sidee magac kale waqti ugu helaa?
Ma in cayr qaato ayaad i mooday oo 2 nin waqti u helo?
Leave a Reply to Boqortooyada somaliya